appFigures: Tatitra ho an'ny Developers App Mobile | Martech Zone
appFigures dia sehatra fanaovana tatitra mora vidy ho an'ireo mpamorona fampiharana finday izay mampivondrona ny varotra fivarotana app anao, angona doka, tsikera manerantany ary fanavaozana ny laharana isan'ora. appFigures manangona sy maka sary an-tsaina ny isa amidy sy fampidinana, tsikera sy laharana manerantany ary data hafa ny vahaolana fitaterany.
Rohy fivarotana marobe - manara-dia sy mampitaha ny fampiharana iOS, Mac, ary Android amin'ny toerana iray.
Tatitry ny mailaka isan'andro - miaraka amin'ireo tarehimarika lehibe, ao anatin'izany ny angon-drakitra, ny fampidinana, ny vola miditra amin'ny doka ary ny laharana vaovao.
Laharana fampiharana - fanarahana ny laharam-pahamehan'ny rindranasa misy anao, soraty daholo amin'ny sokajy rehetra. Nosintonina avy amin'ny fivarotana fampiharana rehetra manerantany ny laharana misy fanavaozana isan'ora.
Tatitra sy sary an-tsary - hazavao ny varotra, fampidinana ary fanavaozana ny app anao amin'ny alàlan'ny fitaovana ifandraisana. Fakafakao ny varotra amin'ny daty, amin'ny firenena, ary hatramin'ny faritra rehetra amin'ny pejy iray.
API mpandrindra - Midira amin'ny programa amin'ny alàlan'ny REST amin'ny alalàn'ny fandaharana API ary manitatra na mamorona rindranasa.
Fanafarana angona mandeha ho azy - manafatra mivantana ny angon-drakitrao amin'ny magazay.
Hanara-maso ny doka eny an-tsena - manara-maso ny fidiram-bola iAd sy AdMob eo akaikin'ny fivarotana fampiharana, avy amin'ny kaonty appFigures tokana. Hizaha fahatsapana, tsindry ary maro hafa amin'ny firenena, daty na fampiharana.
Hevitra voadika - vakio izay lazain'ny mpampiasa momba ny fampiharana anao miaraka amin'ny hevitra sy valiny rehetra nadika tamin'ny fiteninao manokana.
Miaraha miasa mora foana - Mizarà soa aman-tsara amin'ny olon-drehetra ny angon-drakitrao ary fetraho izay angona azo atao ary haharitra hafiriana.
Tags: laharana fampiharana amazonafampiharana amazonafanaraha-maso ny fampiharanalaharana fampiharanafampiharana ny tatitralaharana fivarotana appappfiguresapple storelaharana fampiharana droidgoogle playlaharana fampiharana iosfampiharana ios